Ka anyị chee ya ihu, Google Analytics bụ ọgba aghara maka nkezi azụmahịa. Maka ndị ọkachamara na-etinye oge dị ukwuu n’elu ikpo okwu, ọ bụ ihe ngosi zuru oke ma sie ike nchịkọta ikpo okwu nke anyi maara nke oma na anyi nwere ike inyocha ma wedata iji nweta azịza nye ajuju obula anyi nwere. Dịka ụlọ ọrụ, anyị abụghị ndị azụmaahịa na-eto eto mana anyị nwere nsogbu gbasara dissecting data mgbe ụfọdụ.
Whatagraph na-ewe ya ọzọ, na-ewu data Google Analytics n'ime mara mma infographics na ederede ma enwere ike ile ya site na ihe nchọgharị ma obu weputa ya site na PDF. Debanye aha, tinye akaụntụ Google Analytics gị, họrọ ihe onwunwe gị, ị na-agba ọsọ ma na-agba ọsọ.
Kwa ụbọchị, kwa izu, kwa ọnwa ma ọ bụ afọ ruo ụbọchị na-akọ akụkọ iji tụnyere oge nke afọ gara aga